Olee otú Loop Videos Iji VLC
VLC bụ ọgaranya media ọkpụkpọ na ọtụtụ media akpọ atụmatụ na ekwe ka gị ike fun ahụmahụ na ya. Ọ bụrụ na ị na-amasị ụfọdụ video ma ọ bụ chọrọ ele ụfọdụ ihe n'ụzọ zuru ezu na gị mgbe niile na-eji mma, akaghị. Ị nwere ike akaghị dum video ma ọ bụ ngalaba nke video on akaghị. N'ebe a, anyị ga-ahụ a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu akaghị vidiyo na VLC ọkpụkpọ.
Nkebi nke 1: looping video on VLC on Windows
Part 2: looping video on VLC iji Mac
Part 3: ugboro ugboro kpọmkwem ngalaba nke video
1. Mepee video ị chọrọ akaghị iji VLC ọkpụkpọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ akaghị multiple video faịlụ tinye ha playlist.
2. Iji akaghị video Dị nnọọ gaa akaghị button na pịa ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ akaghị otutu faịlụ, dị nnọọ Toggle bọtịnụ ma akaghị otu ma ọ bụ niile na Toggle ruo mgbe i iru gị chọrọ n'ihi.
Abụọ ndị a-nzọụkwụ ga-eme ka n'aka na gị videos na-akaghị ruo mgbe ị igbochi ha. Ị ga-amarakwa na button nwere ole na ole dị iche iche nhọrọ Toggle n'etiti dịghị akaghị, akaghị otu, na akaghị niile. Ị nwere ike tinye ihe faịlụ na playlist.
Nkebi nke 2: looping video on VLC iji Mac
Dị nnọọ ka windows, ọ bụ otu ihe ahụ Mac ka akaghị video ma ọ bụ vidiyo si gị playlist. -Eduzi gị, ebe a bụ nzọụkwụ na ị pụrụ ịgbaso:
1. Open na VLC media ọkpụkpọ na-emeghe faịlụ ma ọ bụ faịlụ na ị chọrọ akaghị. Gaa media menu na-aga na-emeghe faịlụ.
2. Iji akaghị faịlụ na playlist, na ala dị nnọọ Toggle akaghị bọtịnụ. Pịa ya ozugbo ka akaghị onye na akaghị ọzọ akaghị niile. Ị nwere ike pịa ọzọ gbanyụọ toggle. Ọ niile na-adabere otú ị chọrọ na-egwu videos.
Ndị a bụ ndị dị mfe ihe ndị ị pụrụ eso na-akaghị vidiyo ma ọ bụ dị iche iche video faịlụ. Ị nwere ike tinye ihe faịlụ na playlist.
Nkebi nke 3: ugboro ugboro kpọmkwem ngalaba nke video
Mgbe na-eke ma ọ bụ edezi videos nwere ike ị chọrọ ịhụ kpọmkwem ngalaba maka video. Na VLC, kpọmkwem ngalaba nwere ike mfe looped na mfe bọtịnụ. Lee ndị nzọụkwụ ị pụrụ ịgbaso ka akaghị kpọmkwem ngalaba.
1. Launch video iji VLC na gị usoro. Gaa ele taabụ mbụ na n'okpuru ngwaọrụ pịa Advanced Controls.
2. Ị ga-ahụ ole na ole ọhụrụ buttons egosi na ala. Ugbu a iji akaghị kpọmkwem ngalaba. Mbụ, ihe ndị video ka amalite nke akaghị ngalaba na click na kpọmkwem akaghị bọtịnụ.
3. Ugbu a rụchaa akaghị, na-video ruo ọgwụgwụ isi na pịa na otu button ọzọ. Ị ga-ahụ abụọ ihe nke button acha uhie uhie. Ugbu a-egwu video na ngalaba a ga-looped.
The usoro bụ otu ihe ahụ ma Mac na Windows arụ ọrụ usoro.
> Resource> VLC> Olee otú iji Loop Videos Iji VLC?